Surgery For Bladder Control Problems In Women in Somali | Continence Foundation of Australia
Surgery For Bladder Control Problems In Women in Somali
Qaliinka Loogu Talagalay Dhibaatooyinka Kontoroolka Kaadiheysta Ee Dumarka
Dumar badan ayey ka daadataa kaadidu ama isqooya nafsadooda markay qufacaan, hindhisaan ama jimicsadaan (tan waxaa layiraahdaa ceshad kari waynta welwelka leh). Meesha ay jirto daaweyn badan oo marka hore laysku deyi karo, dumarka qaarkii waxay u baahan yihiin qaliin in lagaga sameeyo dhibkaan.
Maxaa sab aba kontoroolka dhibaatooyinka kaadiheysta?
Dhibaatooyina kontoroolka kaadiheysta waxaa badanaa sababa waxyeelada muruqyada sagxada miskaha iyo unugyada taageera iyaga.
Sagxada miskaha waxay ka sameyn san tahay duuduubka muruqyada iyo unugyada kale. Duuduubkaan way fidaan sida daldalan oo ku hareeraysan kaadiheysta iyo ferjiga laga bilaabo dabagebinta xagga danbe ilaa lafta gumaarka ee xagga hore. Muruqyada sagxada miskaha waxay qabtaan waxyaalo badan, sida:
caawimaada si loo daboolo kaadiheysta, ferjiga (marinka hore) iyo galka (marinka danbe); iyo
caawi si aad u heyso kaadiheysta, uterus (ilmogaleenka) iyo caloosha meeshooda caadiga ah.
Waxaad ogaan kartaa wax badan oo ku saabsan muruqyada sagxada miskaha ee warqada “hal saddexdii Dumar ahba ee weligoodba dhalay ilmo ayaa Isqooya”. Dhibaatooyinka kontoroolka kaadiheysta waxay ka bilaabi karaan marka muruqyada sagxada miskaha ay daciifiyaan iyadoo:
aan muruqyada aysan ahayn kuwo firfircoon;
uur yeelashada iyo ilmo dhalida;
caloosha oo fadhida;
miisaankaaga oo badan;
wax culus qaadida;
qufuca socda wakhti dheer (sida qufaca sigaar cabaha ama neefta); ama
Sidee baa loo daaweyn karaa dhibaatada kontoroolka kaadiheysta?
Warka fiicani wuxuu yahay in dumarka badidiisu ay si fiican u kantarooli karaan kaadiheystooda iyagoo ku xoojinaya muruqyada sagxada miskahooda tababar. Warqada ah “Tababarka Muruqyada Sagxada Miskaha ee loogu talagalay Dumarka” waxay kuu sheegaysaa sidii. Dhakhtarkaaga, fiisiyoteri yaqaan ama kalkaalisada la talliyaha ceshadka kaadida oo sidoo kale awoodi doona inay ku caawiso.
Goorma ayaa loo baahan yahay qaliinka?
Dumar tiradoodu aad u yar tahay habka aadka u sahlan ayaa ku guuldareysan kara inuu ka caawiyo kontoroolka kaadiheysta, iyo kaadida da’aysa ayaa ka dhigi kara nololshooda mid dhib badan. Xaaladahan waxaa laga yaabaa in loo baahdo qaliin. Qaliinka waa inuusan weligiis noqon doorashada ugu horeysa. Dhammaan qaliimada waxay leeyihiin khataro. Waa inaad kala hadashaa khatarahan dhakhtarka qaliinkaaga.
Maxaad weydiin doontaa dhakhtarkaaga qaliinka?
Ka hor intaadan ogolaan qaliinka, waa inaad si buuxda ugala hadasha dhakhtarkaaga qaliinka. Waxaad sameysaa liiska su’aalaha aad dooneysid inaad weydiiso. Kuwani waxay dabooli karaan:
waa maxay sababta qaliinka noocan ah laguugu doortay;
sida ugu wanaagsan ee uu u shaqeynayaa waa side;
waa maxay faahfaahinta qaliinka;
Waa maxay dhibaatooyinka dhacaa, labadaba wakhti gaaban iyo wakhti dheer;
dakhar noocee ah ayey ka tegayaan, xannuun noocee ayaa ku qaban doona;
wakhti intee le’eg ayaad u baahan doontaa inaad qaadato;
ilaa intee ayey igu kaceysaa; iyo
Saameyntu intee in le’eg ayey qaadaneysaa?